singapore | Sanchaung Journal
၄။ ကမ်းခြေချန်ကီဘိလစ်(Changi Village) မှာ အပန်းဖြေတော့
ပင်နီစူလာပလာဇာ (peninsula plaza) မှာ အစုံတွေ့ရ
(၁၄-၅-၂၀၁၁) နေ့ လမ်းပြကြယ် စာကြည့်တိုက် စာချစ်သူများ စင်္ကာပူနိင်ငံမှ ကျင်းပပေးသော Poetry Performance ပွဲတွင် ရွတ်ခဲ့သော ကဗျာ
ကောင်းကင် online မဂ္ဂဇင်းမှ ကူးယူဖော်ပြထားပါသည်။
Changi Village : အနားယူ အပန်ဖြေရန်ခေတ်မှီစွာ တည်ဆောက်ထားသော အပန်းခြေစခန်း။
peninsula plaza: မြန်မာတွေ ဆုံတွေ့ သောနေရာ၊ မြန်မာ ဆိုင်တွေ ဖွင့်ထားသောနေရာ။
စင်္ကာပူက PC Show 2010
June 10, 2010 freebird	Leaveacomment
စင်္ကာပူက ဦးဦး၊ဒေါ်ဒေါ်၊ ကိုကို၊ မမ တို့ ဆီက နောက်ဆုံးထုတ် ကွန်ပျုတာ၊ ဖုန်း အစရှိတာတွေ မှာချင်ရင် – အခု PC Show 2010 စ နေပြီ – 10 June မှ ၁၃ June အထိ ပဲနော်-
ပစ္စည်းကောင်း ဈေးချိုချိုနဲ့ ရောင်းတာနော် –
ဘာမှာ ရမှန်းမသိရင်၊ ဘာဝယ် ရမှန်းမသိရင် -
ပစ္စည်းများကို အုပ်စုအလိုက် စုစုစည်းစည်း ဖော်ပြထားပြီး၊ တခုချင်းစီအတွက် မှတ်ချက်လေးတွေပါ ရေးပေးထားပါသည်။ အသေအချာလေ့လာပြီးမှ ၀ယ်ချင်ရင်တော့ -ဒီမှာ အရင်လေ့လာပါ။
ဈေးနှုန်းတွေက နေ့ စဉ်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသည်။ နေ့ စဉ်ပြောင်းလဲနေသော ဈေးနှုန်းများကို လူတိုးမခံရဘဲ သိလိုလျှင်-
ကဲ ဈေးနှုန်းလည်းသိပြီ။ ပစ္စည်းတွေ အကြောင်းလဲ သိပြီ။
၀ယ်လိုတာ ၀ယ်လို့ ရပြီ။
မှာလိုတာ မှာလို့ ရပြီ။
Continue reading ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံ့ မနစ်ပါ။ →
January 12, 2010 freebird	Leaveacomment
စင်္ကာပူမှ မြန်မာ သူငယ်ချင်းများ – ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ အမိမြေပြန်မယ်။ တခြားနေရာတွေကို အလည်အပတ်ခရီးထွက်မယ်။ ရုံးပိတ်ရက်တွေကို ဘယ်လို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးပြုမလဲ။
အခွင့်အရေးကို လက်လွက်မခံပါနဲ့။ အခုကတည်းက ကြိုတင် စီစဉ်လို့ ရအောင် ဒီ ဇယားလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
Changi Airport အတွေ့ အကြုံ
December 6, 2009 freebird	Leaveacomment
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စင်္ကာပူကို လာမည်ဆိုလို နာမည်ကျော် Changi Airport ကို ရထားစီးပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။
သူငယ်ချင်းကပြောထားတာက Silk Air နဲ့ရန်ကုန်က 10:30 မှာထွက်လာမယ်။ စင်္ကာပူကို 2:30 လောက် Terminal2ကိုဆိုက်ရောက်မယ်တဲ့ ။
ရုံးကနေ နေ့ တ၀က်ခွင့်ယူပြီး ကမန်းကတန်းထွက်လာခဲ့ရတယ်။ MRT ရထား စီးရင်း Juron East ကနေ လေဆိပ်ကို ၁ နာရီ ခွဲလောက်ကြာမယ် စိတ်ထဲမှာမှန်းဆပြီး 12:45 မှာ Juron East MRT ကနေ ထွက်လာခဲ့တယ်။
တကယ်တမ်းကျတော့ မှာ Juron East MRT ကနေ Changi Ariport ကို 52 မိနစ် တိတိပဲ ကြာတယ်။ ရထားထဲက ထွက်ထွက်ချင်း လေယာဉ်ပျံ အချိန်စာရင်းတွေ ဖော်ပြထားတဲ့ Electronic Display Board ကို ချက်ချင်း တွေ့ လိုက်ရတယ်။ ကျွန်တော် အရမ်းဝမ်းသာသွားတာပေါ့ – ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းစီးလာတဲ့ လေယာဉ်ပျံ ဘယ်အချိန်ရောက်မလဲ။ ဘယ် Belt မှာ ပစ္စည်း ရွေးပြီး ။ဘယ်အပေါက်ကနေ ထွက်လာမှာလဲ -သိချင်လို့ ပါ။
တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ အားကျ အတုယူဖို့ ကောင်းတာ လူတွေရဲ့အချိန်ကို တန်ဖိုးထားပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး လွယ်ကူ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်။
Continue reading Changi Airport အတွေ့ အကြုံ →
Singapore 2009 Population
November 24, 2009 freebird	Leaveacomment
Singapore’s population hit almost 4.99 million in June 2009.
The Department of Statistics show that the number of citizens grew from 3.16 million last year to 3.2 million this year, while that of permanent residents inched up from 0.48 million to 0.53 million in 2009. The number of non-residents rose by 4.8 % to reach 1.25 million.